Ry Vaomiera Eoropeana ô: Aza avela hampiasa ny tahirinay mba hanodikodinana vato ireo antoko politika ireo · Global Voices teny Malagasy
Afa-manararaotra lesoka fiainana an-takonana ny antoko politika hanangonana lahatahiry saropady
Voadika ny 25 Mey 2019 12:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, English, Français, عربي, English
“Propagandy” nataon'i Pawel Kuczynski. Sary nampiasaina niaraka tamin'ny fanomezan-dàlan'ilay mpanakanto.
Ity lahatsoratra fanehoan-kevitra ity dia nosoratan'i Valentina Pavel, sakaizan'i Mozilla ao amin'ny Privacy International ary mpikambana ao amin'ny Fikambanana ho an'ny Teknolojia sy Aterineto, monina any Romania. Tsy maneho ny hevitry ny Global Voices ny hevitra amin'ny lahatsoratra.
Rehefa nipoaka ny vaovao fa nanangona lahatahiry manokan'ny mpiserasera Facebook an-tapitrisany ny Cambridge Analytica — ary avy eo nampiasa izany lahatahiry izany mba hampirona fifidianana — dia haingana avy hatrany ny voka-dratsiny. Nanakatom-baravarana ilay orinasam-pitrandrahana tahiry any Angletera, niatrika fanadihadiana iraisampirenena ny Facebook, ary nahafantatra ny olona manerana izao tontolo izao ny fahamoràn'ny fanaovana fijirihana ao amin'ny fifidianana demaokratika amin'ny alalan'ny fanararaotana ny lahatahiry manokan'ny mpifidy.
Nandritra ny fotoana nipoahan'ity tantara ratsy ity, mieritreritra ianao fa nampiasa ireo fitaovana rehetra teo am-pelatanany ny demaokrasia any Eoropa- anisan'izany ny Fandrindrana Ankapobeny Fiarovana Lahatahiry (GDPR amin'ny teny Anglisy) – mba hisorohana ny fanaovana fahadisoana tahaka izany amin'ny ho avy.
Saingy manome “fanalefahana” sasantsasany momba ny fampidirana azy tao amin'ny lalàna nasionaly ny Fandrindrana, mamela ireo Firenena Mpikambana hampiditra ny sasany amin'ny fitsipiny manokana. Amin'ny toe-javatra sasany, raha tokony hiaro ny zon'ny tsirairay, dia mametra ny fahalalahana maneho hevitra, manimba ny tsiambaratelo, ary manome vahana ny fanapariahana vaovao diso ireo fiavahana ireo. Ny tsy fahampian'ny fanamafisana ny fampiharana ny fitsipika GDPR no mety hitarika amin'ny fahasamihafana eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny angon-drakitra (lahatahiry) manokana ao anatin'ny firenena mpikambana, ao anatin'izany rehefa fifidianana.
Ny GDPR, izay nanan-kery tamin'ny volana mey 2018, dia mametraka andianà fitsipika iraisan'ny Vondrona Eoropeana momba ny fanangonana, fikarakarana ary fitehirizana ny angon-drakitra (lahatahiry) manokan'ny olona.
Ankoatra ireo fepetra hafa, amin'ny ankapobeny ny fitsipika dia mitaky amin'ireo orinasa sy fikambanana tsy miankina mba hahazo ny fankatoavan'ny tsirairay alohan'ny hanangonana ny tahirin'izy ireo manokana (toy ny anarana, mailaka, laharana an-tariby sy ny vaovao manokana hafa sy ny fifandraisana). Manatsara ny zon'ny vahoaka ihany koa ny GDPR, ahafahan'ny olom-pirenena mangataka ny kopian'ny lahatahirin'izy ireo.
Na dia Fitsipika Fandrindràn'ny Vondrona Eoropeana aza ny GDPR, dia azon'ny governemanta nasionaly ny mampiditra ny sasany amin'ireo fehezan-dalànany manokana ao amin'ny lalànam-pireneny, manokatra lalana ho fanavahana ny sasany ho an'ireo antoko politika izay voalaza eto.
Ohatra, any Romania, nampiditra fanavahana izay mamela ireo antoko politika sy fikambanana hijery ny lahatahiry manokana tsy misy fankatoavana ary tsy misy fepetra fiarovana amin'ny fanararaotana mety misy ireo mpanao lalàna, ka mamorona karazana “wild west” (andrefana tsy voafehy) amin'ny tahiry manokana. Ohatra, nanomboka nanolotra vaovao momba ny zokiolona any amin'ireo antoko politika ny biraon'ny paositra nasionaly, sampan-draharaham-panjakana, ??ka nahafahan'ny antoko politika mikendry azy ireo amin'ny vaovao manokana mandritra ny fampielezan-kevi-pifidianana.
Ireo mpanao lalàna Romainina koa nametraka fetra tafahoatra momba ny fampiasana ny angon-drakitra manokana ho an'ny tanjona fanaovan-gazety, tamin'ny hetsika izay mety hitsabaka ny asa fanaovan-gazety fanadihadiana ary manakana ny famoahana izay mahaliana ny vahoaka.
Mbola ho hitantsika ny fiantraikan'ity fanavahana mametraka olana ity. Saingy talohan'ny nampidirana io fanavahana io, dia nampiseho ireo manampahefana misahana ny fiarovana lahatahiry fa afaka mampiasa ny GDPR ho fitaovana hampanginana ny media izy ireo.
Tamin'ny raharaha RISE Project, nanatona mpanao gazety nitatitra ny mety ho fifandraisan'ny mpanao politika iray tamin'ny orinasa mpanao hosoka ny manampahefana Romainina misahana ny Fiarovana lahatahiry. Nangataka tamin'ireo mpanao gazety ny manampahefana mba hanome ny vaovao momba ny loharanom-baovaon'izy ireo ary nandrahona azy ireo tamin'ny fandoavana lamandy goavana. Nisy araka izany ny fitarainana napetraka tany amin'ny Vaomiera Eoropeana, saingy tsy nisy fepetra noraisina.
Fitsipika mitovy any amin'ireo firenena hafa
Tsy i Romania irery ihany no firenena Vondrona Eoropeana ahitana antoko politika tsy dia voafetra loatra amin'ny fitantanana lahatahiry manokana. Any Espaina, mamela ny antoko politika hanangona ny mombamomba ny daholobe avy amin'ny loharanom-bahoaka toy ny tranonkala sy ny media sosialy ny lalàna. Nolazaina tamin'ny Vaomiera Eoropeana nanomboka tamin'ny volana Novambra lasa teo izany fanavahana miteraka olana izany, saingy enimbolana taty aoriana, mbola tsy nisy fepetra mivaingana noraisin'ny sampan'ny vondrona Eoropeana.
Natao tamin'ny faran'ny volana Aprily ny fifidianana tao an-toerana, tao Espaina ary handeha hadatsa-bato amin'ny fifidianana Eoropeana indray ny mpifidy amin'ny faran'ny volana Mey. Nampiseho ny fikarohana nataon'ny Privacy International fa misy ny fanontaniana raha mifanaraka amin'ny fepetra napetraky ny manampahefana Espaniola momba ny fiarovana Tahiry ny fampiasan'ny antoko politika ny angon-drakitra manokana.
Any Angletera, mbola omen'ny lalàna alalana ny antoko politika hijery ny angon-drakitra manokana mampiseho hevitra politika tsy mila fankatoavan'ny mpiserasera. Fantatsika ny maha-saropady izany – na dia talohan'ny Cambridge Analytica aza, nisy ny Diarin'i Emma, ??bilaogy iray momba ny fikarakarana zazakely izay nivarotra ny tahiry manokan'ny olona maherin'ny iray tapitrisa tamin'ny antoko politika. Izany no antony, na dia eo aza ny fepetra voalazan'ny lalàna ao Angletera, mahatonga ireo antoko politika namporisihana hanolo-tena ampahibemaso tsy hampiasa ny fanavahana omen'ny lalàna mba hikendrena mpifidy.
Inona no dikan'ireo fanavahana ireo amin'ny olom-pirenena?
Mety mitondra mankany amin'ireto toe-javatra manaraka ireto ireo fanavahana mampisy fanararaotana lahatahiry manokana efa nitranga teo aloha :
Fanodikodinan-doha mpifidy bebe kokoa: Manaiky ny fomba amam-panaon'ny Cambridge Analytica amin'ny ankapobeny ny fanavahana ao Romania. Vokatr'izany, dia afaka mamoaka dokambarotra na filazana mamitaka izay manararaotra ny fanahiana manokan'ireo mpiserasera ny antoko politika, ary mampirona azy ireo hifidy (na manohitra) kandidà sasany. Hitantsika manerana izao tontolo izao ny anjara asa tafahoatra vitan'ny vaovao diso antserasera mandritra ‘ny fifidianana tao anatin'ny taona vitsy farany. Tokony nahafahan'ireo mpandrindra (mpanao lalàna) mba hiditra an-tsehatra sy hisoroka fanitsakitsahana bebe kokoa tsy hitranga intsony ireo fahadisoana tamin'ny lasa ireo, saingy mbola tsy nisy izany.
Fandrahonana ny fiarovana sy ny fiainana antakonan'ny olona: Raha misy antoko politika na mpanao dokambarotra manana ny lahatahiry momba anao manokana, raha azo tamin'ny fijirihana izy ireo, dia [voajirika] toy izany koa ianao. Amin'ny famelana ireo vondrona ireo hanangona sy hitahiry angona manokana marobe tsy misy fiarovana, dia ho lasa marefo eo amin'ny fiporitsahan'ny tahiry sy izay voina ara-piarovana ireo Eoropeana an-tapitrisany.
Tsy ampy ny fahazoan-torohay: Amin'ny tontolon'ny fanarahamaso tsy tapaka izay ahitàna hafatra manokana azo hikendrena mpifidy, mety ho sarotra ny fampivelarana hevitra nahazo tokoa izay tokony ho fantatra. Ahoana no ahafahanao mihevitra amim-pandinihana lalina ny ampahany kely sy sombintsombiny amin'ny tantara fotsiny no azonao ary mahazo hafatra izay natao ho anao manokana ianao? Ahoana no mbola hisian'ny fifanakalozan-kevitra afaka sy mahafanta-javatra?
Tsy mbola nisy fotoana tena manan-danja nampiharana ny fiarovana ny angon-drakitra: Nahatratra haavo vaovao ny fandisoam-baovao, ary afaka herinandro vitsy ny fifidianana parlemantera ao amin'ny vondrona Eoropeana. Tena zava-dehibe ny mamaha ny olana avelan'ireo fanavahana mampidi-doza ireo alohan'ny fifidianana ary alohan'ny hamitana fahapotehana.
Amin'ny 26 May, tokony hanery ny kandidà parlemantera hametraka ny fiainana antakonana ho ambony eo amin'ny paikadiny sy hiaro ny fombafomba demaokratika ireo mpifidy ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Aorian'ny fifidianana, rehefa voatendry ny Vaomiera Eoropeana vaovao, tokony hangataka azy ireo mba hampihatra mafy ny GDPR sy ny fiarovana ny fiainana antakonana ny mpifidy.
Mety hamparefo ny demaokrasiantsika ny fepetra fitantanana tahiry ho an'ny antoko politika. Tsy maintsy manao ny asany ny Vaomiera Eoropeana amin'ny fiantohana fa mihatra manerana an'i Eoropa ny fitsipika GDPR ary voaaro ny lahatahirin'ny tsirairay.
Fantaro ny fomba fanakanana ny dokambarotra mikendry olona ao amin'ny Twitter, YouTube, Facebook ary Instagram, amin'ireto toro-lalana izay noforonin'ny Privacy International ireto.